Womens Microsuede Moccasin Slipper ine Ribhoni Bow - Goodao Technology Co, Ltd.
Muenzaniso NO. MakaBLM16050
Yedu moccasin yevakadzi yakavakirwa yemafashoni uye yakasununguka moccasin slippers iyo ndeyechokwadi kuendesa zuva nezuva. Yakagadzirirwa nyaradzo, iyo yakapfava Foam midsole inobatsira kupa yakapfava pasi petsoka, nepo inoteerera yepamusoro-yemubhedha furo inogadzira iyo yakapfava yakapfava ruzivo.soft fit iyo isingarambidze kushanda, tsoka dzako dzinozokutenda nekupfeka shangu iyi.
Ultra-Nyoro Wool-Senge Plush Fleece Lining: Zviri nyore kutsvedza-pane dhizaini yekugadzira, pamwe neyemhando yepamusoro uye yekunyaradza inogadzirwa nemurume fluffy plush dece lining iyo inosanganisa tsoka dzako zvakanaka uye inopa nyaradzo inonyaradza.
Durable & Anti-Skid Rubber Sole: Iyo mwenje-huremu uye inogara yakasimba yerabha chete inoita kuti micro suede slippers ive yakakwana yekushandisa kwemukati nekunze kwemhuri. Anti-slip outsole inobvumira kutsika zvisina ruzha muimba yekurara. Imwe neimwe yematanho ako inozove yakanyarara neyakagadzika-isingagadzirike mameseji pazasi.
Yakakwira-Dhivhaji Yekuyeuchidza Foam Insole: Iyo yakashongedzwa diki suede yekumusoro isina kumashure mashure ekumhara yakasungirirwa neakakwira-density ndangariro furo iyo inonyatso kuumba kutsoka dzako uye inochengeta chimiro.
Masitayera & Ruvara Sarudzo: Iyi flat flat slipper yakagadzirirwawo kune varume vane mavara akasiyana. Inowanikwa mukusarudzwa kwevakadzi kweNdai & Waini. Yakagadzirwa nemvere dzemakwai-senge yepamusoro uye yakakwira density yekukochekera, ma slippers aya angangonzwa kakunyangara pakutanga uyezve ivo vanobva vatambanudza zvishoma kune yakagadziriswa yakaenzana mushure mekupfeka akati wandei.
Pfungwa Dzinotorwa Ku Ultra Yakakwirira Maitiro: ULTRAIDEAS inovavarira kupa yega mutengi sevhisi iri nani uye chigadzirwa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Neyakareruka dhizaini asi yemhando yepamusoro zvinhu, aya slippers anogona kuenderana mushe neyako yekutandarira kupfeka, mapijama, nguvo nezvimwe.
● Ndangariro furo mubhedha
● Microfiber kumusoro
● Tera / mbichana
● Rubha kunze
● Tinogona kukudziridza akasiyana lining zvinhu zvechimiro izvi.
● Shongedza ribhoni uta pane vamp.
Tinomirira chimwe chinhu chakakura kupfuura shangu. Tinoita zvakanaka nevanhu nenyika. Pamwe chete, isu tinotyaira shanduko ine musoro munharaunda dzakatenderedza pasirese. Isu tinoenda pazviri.
Pashure: Vakadzi Vakakurumbira Cowsuede Clog Slipper Yakakwira Hunhu Lining neAnti Slipper Outsole
Zvadaro: Ruoko Thread Yakakwira Hwakanaka Cowsuede Venetian Slipper Nyaradzo Footbed uye Anti Flexible Outsole Indoor Shangu
Moccasin Vanhurume Slippers
Warm Moccasin Slippers
Shinda Moccasin Slippers
Yevakadzi Inodziya Ndangariro Furo Slippers Yakashata W ...
Mens Cowsuede Moccasin Slipper Mens Akanzwa Veneti ...
Wms Leather Shoes Inodziya Nyaradzo Fuax Fur Slipper